“Yize ukwesulwa kwamanye ama-oda aphesheya kwezilwandle kubangelwe wubhubhane, bengingalindele ukuthi ngithole ama-oda amaningi ngokuthembela ekusakazweni bukhoma namhlanje. Kube yingozi enhle ngempela! ” Ntambama ngoMeyi 30, uZhu Li, usihlalo wePlume Piano Manufacturing (Wuhan) Co, Ltd., owamenywa ukuthi abambe iqhaza ekusakazweni bukhoma kwesibili kwe- "Huangpi Intelligent Manufacturing Manufacturing Mulan Boutique", wayejabule kakhulu ngokuthi ekugcineni bahlomule ekusakazweni bukhoma kwe-e-commerce okokuqala.
IPlume Piano Manufacturing (Wuhan) Co., Ltd.iyibhizinisi lokukhiqiza izinsimbi zomculo eliseXinlong Tengfei Industrial Park, Hengdian Street, Huangpi, egxile ocwaningweni lwesoftware nentuthuko, ukuklanywa kwemikhiqizo, ukukhiqizwa, ukukhiqizwa kanye nokumaketha ngomkhiqizo wopiyano omile, unxantathu upiyano, upiyano kagesi kanye nepiyano lobuhlakani bokufakelwa. Kusukela yasungulwa ngo-2017, uPlume Piano ubelokhu egxile ezimakethe zaphesheya kwezilwandle. Ngaphezulu kwama-95% wemikhiqizo yayo ithengiselwa amazwe angaphezu kwezi-50 nezifunda emhlabeni jikelele. Umthamo wayo wokuthengisa ufinyelele ku-USD 190 wezigidi ngo-2019 futhi wakhombisa ukuthambekela kokukhula minyaka yonke.
NgoJanuwari 2020, uZhu Li wasayina i-oda eliyizigidi ezingama-21 namakhasimende amadala kumafriji ezinsimbi zomculo, ekuqaleni okwakuhlelwe ukuthunyelwa ngoJuni, kepha ngemuva kokuthi ebuyile ngoJanuwari 22, amanye amakhasimende aphesheya akhansela ama-oda awo ngenxa yalolu bhubhane. UZhu Li uzame ukuxhumana namakhasimende akhe amadala ngethemba lokuthi uzobuyisa ukulahleka kwakhe, kepha ama-imeyili angama-200 awaphendulanga. Ngangikhala ngokoqobo, futhi ngangingazi ukuthi ngenzeni. ” “UZhu Li uthe.
Lesi sikhathi sokubamba iqhaza kuhulumeni wesifunda ohleliwe osakaza bukhoma i-e-commerce, uZhu Li wayengenakho ukukholwa ekuqaleni. Ngokungalindelekile, imizuzu engama-90 yokusakaza bukhoma, empeleni ithole ama-oda ama-piano edijithali ama-3. “Namuhla kungokokuqala ukuthi sizame ukusakaza bukhoma i-e-commerce. Bengingaqondi phambilini. Bengingalindele ukuthi umphumela ube muhle. ” 'Noma ukuthengisa kuthinteka kakhulu yilo bhubhane, uhulumeni wabeka isisekelo sokuthi amabhizinisi akwazi ukucula nokusisiza sandise izindlela zokuthengisa. Futhi kufanele siguqule indlela yethu yokuthengisa. ' Uthe kulo nyaka, uPlume Piano uzosuka ezimakethe zaphesheya aye kwezasekhaya, futhi asebenzise indlela entsha yezomnotho yokusakazwa bukhoma kwe-e-commerce ukukhulisa kancane kancane imakethe yasekhaya.
Ikhibhodi ye-Smart Piano, UPiano Oqondile Kagesi, Ukulungiswa Kwepiyano Ledijithali, Ipiyano Eqondile Yedijithali, Ugesi uPiano Omkhulu, I-piano yedijithali ephansi,